Lix qof oo ku dhaawacantay iska-horimaad ka dhacay miyiga Karkaar; ciidamada dawladda oo kala dhex galay. – Radio Daljir
Lix qof oo ku dhaawacantay iska-horimaad ka dhacay miyiga Karkaar; ciidamada dawladda oo kala dhex galay.
Qardho, Sept 29 – iska-hor-maad hubaysan oo gaystay khasaaro dhaawac ayaa maanta mar kale ka dhacay deegaanno ka tirsan gobolka Karkaar, kaasi oo u dhexeeyay malleeshiyo beeleed xoolo dhaqato ah oo wada deggan deegaanka Uurjire ee degmada Rako Raaxo.
iska-hor-maadka oo la tilmaamayo in uu socday qadar saacado ah ayaa sababay daawaca lix qof oo kuwaasoo ka soo kala jeeda malleeshiyada isku-dhucu dhexmaray sida uu Daljir uu u sheegay guddoomiyaha gobolka Karkaar Cabdiquraan Maxamed Aadan.
Guddoomiyuhu, waxaa uu intaasi raaciyay in xaaladda ay tahay xilligan mid deggan,islamarkaana deegaanka ay wax ka dhaceen ay la wareegeen ciidamo katirsan dawladda Puntland oo uu hoggaaminayay taliye kuxigeenka labaad ee ciidanka booliska Gashanle sare Muxidiin Axmed Muuse, kuwaasi oo gaaray halka ay colaaddu ka dhacday saaka sifo ay u kala dhexgalaan malleeshiyo beeleedka hubaysan xabaaddana u joojiyaan.
“Xaaladdu waa qabawdahay xilligaan, kooxihiina waan kala qaadnay deegaankii la isku farasaarayna ciidamad amniga ayaa la wareegay”ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Karkaar Cabdiquraan Maxamed Aadan,waxaana uu dhinaca kale sheegay in saacadaha soo socda ay rajaynayaan inay la kulmaan wax-garadka deegaanka si xal loogu helo xurgufaha colaadeed.
Muranka u dhexeeya labadaan ardaa ayaa ah mid ku salaysan daaqsin iyo deegaan kala sheegasho, waxaana sidaan oo kale dhawr jeer iskugu maandhaafeen isla deegaanno ka tirsan gobolka.